Atụmatụ, imewe, na ịchacha weebụsaịtị | Martech Zone
Lemonhead mepụtara nnukwu ihe omuma a iji mee ka ihe dị mfe usoro nke atụmatụ, imebe na optimizing gị website. Ihe omuma ihe omuma ahu n’eme gi site na nkezo ato ma tinye aka n’ile, ikike, nnwale, isi okwu na ihe ndi ozo igbanye.
Hazi, imewe na ịmepụta weebụsaịtị wepụtara site na ntanetị. Mkpokọta ihe omuma ihe omuma bu ihe omuma nke imeputa weebụsaịtị na uzo di mfe site na iji atumatu di nma, nhazi imewe na mmejuputa atumatu. Otu mpempe akwụkwọ ederede iji nyere gị aka ịghọta ma mee ka usoro gị dị mfe na ịmepụta weebụsaịtị gị.
Nke a ga - abụ ezigbo mbipụta iji gosipụta na ụlọ ọrụ ọ bụla!
Tags: Anchịkọta saịtịurunhazi weebụnjikarịcha weebụsaịtịnjikarịcha weebụsaịtịatụmatụ weebụsaịtị
6 Egwuregwu ndị na-ezighị ezi
Apr 18, 2012 na 7: 11 AM
Daalụ Douglas maka ịchọta infographic a. Ọ bara uru ma na-ezi ihe. Ọ bụ ndị dị otú ahụ a oké ọkara anyị “graphic gbakwasara” ndị mmadụ.
Bet nzọ, Susan! Anyị hụrụ n'anya ịkọ oke ozi dịka nke a. Anyị nwekwara Pinterest peeji nke ya Infographics Ahịa
Apr 23, 2012 na 1: 38 AM
Cool .. nnọọ ihe ọmụma na bara uru ..
Otú ọ dị
Mee 7, 2012 na 6: 53 AM
Inye akwukwo ihe omuma bu ihe buru ibu nke bu enyemaka maka imeputa ma chebe weebụsaịtị. Daalụ Mr. Douglas Karr maka ịkọkọrịta ahụmịhe gị.
M hụrụ akwụkwọ ozi a n'anya ma nwee mmasị iji ya na blọọgụ m!
Ọ ga-abụrịrị na m ga-enwe ihe ntinye ederede nke metụtara gị, wee si na-enye gị otuto maka foto ahụ. 🙂
A ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na m nwere ike iji ya = D.
Daalụ maka post 🙂
Gbalia inye onye ode akwukwo otuto: Lemonhead - http://www.lemongraphic.sg/2012/04/15/website-simplified-infographics-design/